Foxconn inokwira kumusoro pane zvinotarisirwa neiyo iPhone 8 | IPhone nhau
Kunyangwe zvisina kurambidzwa kuti isu tichaodzwa mwoyo pakupedzisira, gore rino kune tarisiro maererano neApple smartphone nekuti igore regumi regumi regumi reiyo iPhone. Vaongorori vanoti izvo zviri kuzivikanwa parizvino seApple 8 ichave nhanho huru kuenda kumberi, asi haisi chete nyanzvi dzevaongorori dzine tarisiro. Zviito zve Foxconn Vasvika pakukosha kwavo kwakanyanya mumakore gumi nekuda kwezvaitarisirwa zvakaiswa paiyo iPhone iyo ichatangwa neCompertino muna2017.
Maawa mashoma apfuura, Bloomberg rakabudiswa chinyorwa chaakataura kuti Hon Hai Precision Indasitiri, inozivikanwa zviri nani saFoxconn, yakawedzera 29% mugore rapfuura, uye zvese izvi zvave zvichikurudzirwa neyegumi yegumi iPhone. Isu tinorangarira kuti iyo iPhone 8 yaizouya neiyo OLED skrini kumucheto, bhatani repamba rakabatanidzwa muchiratidziri, dhizaini dhizaini, isina waya kuchaja (kana neyakaiswa) uye, sekureva kwerunyerekupe razvino, kuzivikanwa kwechiso.
Foxconn inogadzirira kuve negore rakanaka nekuda kweiyo iPhone 8
Apple, iyo inopa hafu yekambani purofiti, yakaita chinzvimbo chakakosha mukukasika kweyezvino stock. Kambani yeUS yakazivisa yakasimba-kupfuura-yaitarisirwa iPhone kutengesa mwedzi uno panguva yakakosha yezororo kota.
Ipo iyo iPhone 7, yakaunzwa munaGunyana, yakundikana kugutsa vatengi vazhinji varipo seyakatangira, yakakwezva vatengi vema smartphone. Izvo bodes zvakanaka kune iyo iPhone yakatemerwa kwegore rino.
Zvese zvinoita sekunge zvinoratidza kuti kutengesa kweiyo iPhone 8 kuchapwanya zvese zvinyorwa zvakare, chimwe chinhu chingagone kusangana ne kukwira kwemutengo uko kwaizoita kuti runhare runotevera pachivhariso rwudarike mharanzi ye $ / € 1000. Kana, sekutaura kwerunyerekupe, yakasvika nechaji isina waya (kure), iyo OLED skrini iyo inogona kupa kuzvitonga kuri nani kana nharaunda dzakasviba dzichishandiswa, neTouch ID pachiratidziri, kuzivikanwa kwechiso uye iko kungangoita kuvandudzika mukamera, kwaizo usingave wakashata kugadzirisa aperture yechipiri lens, iwe ungatenga iyo?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone X » Foxconn inogovera mudenga pane zvinotarisirwa ne iPhone 8